Nyetflix Sy Ny Dill: Nosoniavin’i Potinina ny Lalàna Mifehy ny Tolotra Fandefasana Sarimihetsika Vahiny An-tserasera Mivantana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2017 17:29 GMT
Ny lalàna, izay nankatoavin'ny Vaomiera Federaly sy ny “Duma”m-panjakana ao Rosia tamin'ny volana Aprily, dia natao hanohanana ny tolotra fandefasana sarimihetsika Rosiana mivantana amin'ny alàlan'ny fanakendana ireo mpamatsy vahiny toy ny Netflix, Apple TV, sy ny Google Play: mametraka ny lalàna fa ho an'ny Rosiana tsy manana zom-pirenena roa sosona ihany ny fisoratana anarana amin'ireo tolotra mandefa sary sy feo an-tserasera, ary mihoatra ny 20 isan-jaton'ny tolotra no azon'ireo vahiny ananana raha toa ka manana mpisera latsaky ny 50 isan-jato mipetraka ao Rosia izy ary eken'ny filankevitry ny governemanta.
Nahazo fanerena avy amin'i Kremlin ny Netflix hatramin'ny nanombohany niasa tao Rosia tamin'ny volana Janoary 2016. Na dia mbola talohan'ny nidirany tao anatin'ny tsena aza, dia efa naneho ny ahiahiny ny mpiaro ny orinasa fa hanimba ny raharaham-barotry ny ao an-toerana toy ny ivi sy Okko ilay orinasa Amerikana amin'ny tolotra fandefasana horonantsary mivantana. Ho setrin'izany, nampiditra lalàna ireo mpanao lalàna tamin'ny volana Martsa tamin'ny taon-dasa izay mikendry hamadihana 80 isanjaton'ny filman'ireo mpanome tolotra lahatsary avy any ivelany ho viadika amin'ny teny rosiana ary hamokatra, fara-fahakeliny, 30 isanjaton'ny votoatiny ao amin'ny tany Rosiana. Lasibatry ny lalàna manokana ihany koa ny Netflix izay mametra ny fandraisan'anjaran'ny vahiny ao amin'ny fampitam-baovao ho 20 isanjato.
Nidera ny lalàna vaovao ireo mpifaninana amin'ny Netflix ao an-toerana, izay nilaza fa tsy hisy fiantraikany ratsy amin'izy ireo izany. Nilaza i Mikhail Platov, tale jeneraly lefitra ao amin'ny ivi, fa “ekena” ny fepetra vaovao ary “tsy hisy vokany eo amin'ny asan'ny orinasanay izany.” Ny Tale Jeneralin'ny Okko, Ivan Grodetsky, mandritra izany, nandeha lavidavitra kokoa, tamin'ny filazana fa “faly ny orinasany satria tsy notsinotsinoavina ny hevitry ny vondrona hafa, “araka ny tatitr'i Gazeta.ru .
Ankoatra ny fiarovana ny orinasa mpandefa lahatsary mivantana ao an-toerana, nilaza ireo manam-pahaizana sasany fa vokatry ny fanerena avy amin'ny vondrona hafa mahazo tombontsoa amin'ny Aterineto ireo fepetra voalazan'ny lalàna: mitaky ireo tolotra mpandefa lahatsary mivantana mba handrefy ny zotra ao amin'ny [hanisa ny mpijery] Aterineto ny lalàna, raharaham-barotra izay ataon'ny orinasa LiveInternet ampihimamba, fananan'ilay alemana Klimenko, mpanolotsainan'i Potinina momba ny aterineto.
Nitsikera ny mpandinika ny orinasa fa ity volavolan-dalàna ity dia natao hanampiana ny mpikambana ao anatin'i Kremlin mba hanamafisana orina ny famehezany samirery ny fomba fanaraha-maso ny zotra amin'ny Aterineto. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ilay mpikatroka mpanara-maso ny aterineto rublacklist.net, ny fampiasana ny kaontera (fanisana) LiveInternet no “dingana voalohany mankany amin'ny fanaovana ampihimamba ny tahirin-kevitra goavan'ny mpilalao izay hofantenan'ny solontenan'ny manampahefana, kanefa tsy mety mihitsy izany.”
Mandritra izany fotoana izany, nankasitrahan'ny manampahefan'ny fampahalalam-baovao-panjakana ny volavolan-dalàna, izay hanan-kery manomboka amin'ny 1 Jolay 2017, noho ny fanamafisana ny fiarovam-pirenena. Nanamarika i Ekaterina Larina, lehiben'ny sampan-draharahan'ny politikam-panjakana misahana ny haino aman-jery fa “Ampahany manan-danja amin'ny fiarovam-pirenena ny tontolon'ny torohay, izay manan-danja kokoa eo amin'ny fanatontoloana ny habaka aterineto sy ny herim-panintonany eo amin'ny mpanaraka. “